Kurdiyiin mudaharaaddo Erdogan lagu diidanyahay Jarmalka ka dhigay - Worldnews.com
"ay tahay wax aan la qaadan karin in banaan baxaa lagu arko calamada PKK iyo hal ku dhegyadooda, iyadoo wasiiro iyo xildhibaanno Turki ahna laga hor joogsaday in ay la kulmaan muwaadiniintooda"
Khilaafka u dhexeeya Turkiga iyo Jarmalka ee ku saabsan xadhiga qof u dhaqdhaqaaqa xuquuda aadanaha oo Turkigu xidhay ayaa sii xoogaysanaya. Wasiirka arimaha dibadda...
Madaxweynaha Turkiga, Rajab Tayib Erdogan, ayaa ku tilmaamay hogaanka Jarmalka mid "cadow" ku ah dalkiisa, asagoo ugu baaqay dadka asal ahaan Turkiga ka soo jeeda ee haysta...
Erdogan: Waa fadeexad sida uu Maraykanku u dhaqmay
Madaxweynaha Turkiga Turkey, Recep Tayyip Erdogan, ayaa fadeexad ku tilmaamay go'aanka uu Maraykanku ku xiray ilaalo faraha la galay rabshado rabshado dhacay markii uu...
Labo ciyaartooy oo u dhashay dalka Jarmalka, balse asal ahaan kasoo jeeda dalka Turkiga Mesut Özil iyo Ilkay Gündogan ayaa la kulmay madaxda dalka Jarmalka si ay sharaxaad...
Mesut Ozil iyo Ilkay Gundogan oo ah laba laacib oo u dhashay dalka Jarmalka balse asal ahaan kasoo jeeda dalka Turkiga ayaa Sabtidi la kulmay madaxweynaha dalka Jarmalka...
Voa News 2018-05-20
Turkiga iyo Jarmalka oo isku soo dhowaanaya
Wasiirada Arrimaha Dibada ee labada dalka ee Turkiga iyo Jarmalka ayaa ka wada hadlay xiriirka labada dowladood. Xiriirka Isbahaysiga Nato iyo ganacsiga ayaa ka mid...
Wasiirada Arrimaha Dibada ee labada dalka ee Turkiga iyo Jarmalka ayaa ka wada hadlay xiriirka labada dowladood. Xiriirka Isbahaysiga Nato iyo ganacsiga ayaa ka mid arrimaha ay isla soo qaadeen labada dhinac ee Jarmalka iyo Turkiga. Madaxweynaha Turkiga ayaa maalmahanba booqanayay dalka Faransiiska waxaana jirtay in inqilaabkii Turkiga ka dib uu xumaaday xiriirka wadamada Yurub...
Madaxweynaha Turkiga Rajeb Tayib Erdogan ayaa si kulul u weeraray aftidii laga qaaday dadka Kurdiyiinta Ciraaq ee ay ku doonayaan in ay ku go'aan. Erdogan ayaa Kurdiyiinta kala dooransiiyay in ay ka haraan damacooda gooni isu taagga ama uu saari doono cunaqabatayn uu ku jarayo dhuumaha shidaalka ee gobolkan shidaalka ka qaada ee Turkiga taga, islamarkaasna uu xiri doono...
Jarmalka iyo Turkiga oo wada jir u xusay xasuuqi ka dhacay Solingen
Hoggaamiyaha dalka Jarmalka Angela Merkel iyo Wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa si wadajir ah uga qayb galay xuska 25aad ee xasuuqa ka dhacay dalka Jarmalka iyada oo ay xiisad dibloomasiyadeed hareysay labada dal. Madasha xuska uu ka dhacay waxay kula kulmeen dad ka badbaaday weerarkaasi. 29-ki bisha may 1993-di ayaa waxay bam gcmeed ku tuureen...
Madaxweynaha dalka Turkiga ayaa saraakiisha Jermalka la simay kuwii Nazi-yiinta, arrintan ayaana qayb ka ah dagaal sii kharaaraanaya oo dhanka afka ah oo labada dal u dhexmaraya. Recep Tayyip Erdogan ayaa hadalkan kulul jeediyay ka dib markii maamulka Jermalku ay baajiyeen isu soo bax loogu talagalay in taageero lagaga raadinayo dadka asal ahaan Turkiga ka soo jeeda ee Jermalka...
Shacabka Turkiga ee Yurub oo billaabay in ay cadeeyaan
Shacabka Turkiga ee ku nool lix dal oo Yurub ah ayaa billaabay in ay codkooda ka dhiibtaan aftida, ayadoo ololihii arrintaasi ku saabsan uu sababay muran caalami ah. Dadka ayaa u codeynaya haddii ay doonayaan in Turkiga uu ka wareego awoodda baarlamaanka oo la kordhiyo midda madaxweynaha, taas oo xoojineysa madaxweyne Recep Tayyip Erdogan. Qiyaastii seddax milyan oo qof ayaa ka...